Di na nwunye ole na ole gara aga, m nwalere Pịa ndepụta, Kzụ ahịa ịzụ ahịa n'ịntanetị nke Kroger. Usoro ahụ enweghị ntụpọ, yana ọtụtụ uru karịa ịzụ ahịa ahịa. Nke mbụ, enwere m ike ilele mmefu ego m mgbe m na-etinye ihe ọ bụla n'ime ụgbọ m. Enwere m ike ịhụ ihe ọ bụla erere. Usoro ahụ na-achọpụta ngwaahịa m kachasị m zụrụ. O were m nkeji 10 iji gbagote, mee ka ndị otu Kroger buru ụgbọ ala m, ma lelee.
The 2016 Online ụlọ ahịa Shopper infographic na-akọrọ data site na akụkọ na-adịbeghị anya site na Unata. Nkwupụta ahụ na-ekpughe ọnọdụ dị na eCommerce maka 2016 gụnyere: ụmụ nwoke nwere mmasị na eGrocery, GenX bụ ngalaba na-eto ngwa ngwa maka eGrocery na ndị na-azụ ahịa nwere ụmụaka na-amalite maka ntanetị. Abụ m onye egwuregwu zuru oke maka igwe mmadụ!